အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းမှ မြန်မာအမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူး – Alinyaung
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းမှ မြန်မာအမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူး
February 18, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM knowledge 0
US ရဲ့​ကောင်းကင်​ယံမှ မြန်​မာမိန်းက​လေး​ လေယာဉ်​မှူးတစ်​​ယောက်​ ​မောင်​နှင်​ခွင့်​ရ​တော့မယ်​.
29.7.2017 Genbette Susan!ဘေးရန်ကင်းစွာနဲ့ Florida မှCalifonia ထိပျံသန်းလာနိုင်ဘို့ဂုဏ်ယူစွာစောင့်နေပါတယ်..နာရီ ၂၀ ကြာမှာမို့စိတ်တော့ပူမိပါတယ်..US ရဲ့ကောင်းကင်ပြင်မှာမြန်မာမိန်းခလေးလေယဉ်မှုးတယောက်မောင်းနှင်ခွင့်ရခဲ့ပြီမို့အထူးဝမ်းသာတယ်..တတ်နိုင်လို့အခွင့်အရေးရခဲ့ရင် လကမ္ဘာထိ သွားနိုင်ပြီး မြန်မာ့အလံကိုလည်းလွှင့်ထူခွင့်ရချင်ပါတယ်…
၁၉၈၉ ၉လပိုင်းတုန်းကအဖြစ်ကိုသတိယမိပါတယ်…ဂျပန်တက္ကသိုလ်တခုမှာ၂နှစ်သင်တန်းကို ၁နှစ်ထဲစာပေါင်းကျက်ဘွဲ့ရဘို့ပေါ့…အဲအချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးChiba University မှာ Ph.D သင်တန်း (၁၄)ရက်တက်ပြီး ဝငခွင့်ဖြေဘို့စာကျက်ရ…မေမေကျန်းမာရေးကလည်းမကောင်းတဲ့ ပြန်စောင့်ရှောက်ရမလားမသိတော့ ပိုက်ဆံလေးရအောင်ညနေ ၅-၉:၀၀
M’c Donald ဆိုက်မှာpart time ကမဖျက်ဘဲဆင်း …
မနက် ၇:၀၀ ရထားစစီး စာမေးပွဲဖြေ ၁၁:၃၀ ဆိုChiba University သွား ၁၂:၀၀-၄:၃၀ စာသင်ပြီးအလုပ်သွားရတော့ ထမင်းစားချိန်တောင်မရှိ…အိမ်ကို၁၁:၀၀ရောက်ရင်ရေချိုးဘုရားရှစ်ခိုးပြီးစာမျက်မျက်နှာ ၁၃မျက်နှာပါစာတမ်းကိုဆက်ရေးလိုက်တာ…အမလတ်က နင့်မျက်နှာမှန်ကြည့်မိရဲ့လားတဲ့
မျောက်ခေါင်းရုပ်ဖြစ်နေပြီတဲ့လေ…ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို လျော့လို့မရဘူးလေ… အားလုံးကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီး မေမေ့ကိုခဏတွေ့ဘို့ပြန်လာတယ်…
အဲဒီအချိန်မှာ ကားလက်ဆောင်တစီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်..ကျမ တက္ကသိုလ်မှာ တကျောင်းလုံး ပထမ နဲ့အောင်ခဲ့တယ်…Ph.D(Biochemistry ) ကိုScholar အပြည့်နဲ့တက်ခွင့်ရခဲ့
တယ်… လူ့ဘဝမှာ ထိပ်ဆုံးရောက်ဘို့ကြိုးစားရမှာပါ..
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းနဲ့ဘယ်သူကို မှမပြိုင်ပါဘူး…ကျမပြိုင်မဲ့လူက ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာကိုနေရာမပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်…မြန်မာဆိုတာ
Credit-Nyo Nyo Thein
US ရဲ့​ကောငျးကငျ​ယံမှ မွနျ​မာမိနျးက​လေး​ လယောဉျ​မှူးတဈ​​ယောကျ​ ​မောငျ​နှငျ​ခှငျ့​ရ​တော့မယျ​.
29.7.2017 Genbette Susan!ဘေးရနျကငျးစှာနဲ့ Florida မှCalifonia ထိပြံသနျးလာနိုငျဘို့ဂုဏျယူစှာစောငျ့နပေါတယျ..နာရီ ၂၀ ကွာမှာမို့စိတျတော့ပူမိပါတယျ..US ရဲ့ကောငျးကငျပွငျမှာမွနျမာမိနျးခလေးလယေဉျမှုးတယောကျမောငျးနှငျခှငျ့ရခဲ့ပွီမို့အထူးဝမျးသာတယျ..တတျနိုငျလို့အခှငျ့အရေးရခဲ့ရငျ လကမ်ဘာထိ သှားနိုငျပွီး မွနျမာ့အလံကိုလညျးလှငျ့ထူခှငျ့ရခငျြပါတယျ…
၁၉၈၉ ၉လပိုငျးတုနျးကအဖွဈကိုသတိယမိပါတယျ…ဂပြနျတက်ကသိုလျတခုမှာ၂နှဈသငျတနျးကို ၁နှဈထဲစာပေါငျးကကျြဘှဲ့ရဘို့ပေါ့…အဲအခြိနျနဲ့ကိုကျပွီးChiba University မှာ Ph.D သငျတနျး (၁၄)ရကျတကျပွီး ဝငခှငျ့ဖွဘေို့စာကကျြရ…မမေကေနျြးမာရေးကလညျးမကောငျးတဲ့ ပွနျစောငျ့ရှောကျရမလားမသိတော့ ပိုကျဆံလေးရအောငျညနေ ၅-၉:ဝ၀
M’c Donald ဆိုကျမှာpart time ကမဖကျြဘဲဆငျး …
မနကျ ၇:ဝ၀ ရထားစစီး စာမေးပှဲဖွေ ၁၁:၃၀ ဆိုChiba University သှား ၁၂:ဝ၀-၄:၃၀ စာသငျပွီးအလုပျသှားရတော့ ထမငျးစားခြိနျတောငျမရှိ…အိမျကို၁၁:ဝ၀ရောကျရငျရခြေိုးဘုရားရှဈခိုးပွီးစာမကျြမကျြနှာ ၁၃မကျြနှာပါစာတမျးကိုဆကျရေးလိုကျတာ…အမလတျက နငျ့မကျြနှာမှနျကွညျ့မိရဲ့လားတဲ့
မြောကျခေါငျးရုပျဖွဈနပွေီတဲ့လေ…ဒါပမေဲ့ဘဝရဲ့လိုအပျတဲ့အရာတှကေို လြော့လို့မရဘူးလေ… အားလုံးကိုအောငျမွငျစှာဆောငျရှကျပွီး မမေကေို့ခဏတှဘေို့ပွနျလာတယျ…
အဲဒီအခြိနျမှာ ကားလကျဆောငျတစီးပေးနိုငျခဲ့တယျ..ကမြ တက်ကသိုလျမှာ တကြောငျးလုံး ပထမ နဲ့အောငျခဲ့တယျ…Ph.D(Biochemistry ) ကိုScholar အပွညျ့နဲ့တကျခှငျ့ရခဲ့
တယျ… လူ့ဘဝမှာ ထိပျဆုံးရောကျဘို့ကွိုးစားရမှာပါ..
ကိုယျ့လူမြိုးအခငျြးခငျြးနဲ့ဘယျသူကို မှမပွိုငျပါဘူး…ကမြပွိုငျမဲ့လူက ကမ်ဘာအလယျမှာမွနျမာကိုနရောမပေးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ…မွနျမာဆိုတာ
သတို့သားဟန်ဆောင်ပြီး လိမ်လည် လက်ထပ်သည့် အိန္ဒိယအမျိုးသမီး ဖမ်းဆီးခံရ